Slane Irish Whiskey oluqalisa Slane Whisky zokuhlolwa Experience yonkana Ireland | Irish Whiskey .com
Slane Irish Whiskey oluqalisa Slane Whisky zokuhlolwa Experience yonkana Ireland
Slane Whisky Umqondisi Alex Conyngham futhi Slane Whisky Irish Brand Ambassador Will Lynch uqalise Slane Whisky zokuhlolwa Tour ngesikhathi Irish Whiskey Museum Dublin. Photo Credit: Sasko Lazarov / Photocall Ireland
Uchungechunge khulula izenzakalo yokunambitha ukuthola nogologo esiyingqayizivele Irish distilled e emagcekeni edume Slane Castle.
Slane Irish Whiskey umemezele nje uchungechunge okukhethekile nogologo tastings lonke Ireland kuleli hlobo. Slane Whisky Distillery itholakala ngesizathu Slane Castle, Co. Meath enhliziyweni mlando Boyne River Valley, mayelana 45 Kms eNorth West Dublin.
manje Slane kuthiwa distilling Malt Single futhi Single Embizeni Whisky Namanje Irish at siqu distillery nogologo isivakashi isikhungo sabo ubuphansi. [amazon_link asins = 'B072XYCHXY’ ithempulethi = 'ProductAd’ esitolo = 'IrishWhiskeyCom’ esigcawini = 'UK’ link_id = '59ef9189-77a2-11e8-979d-5794aac080f4′]
I Slane Whisky zokuhlolwa Experience bazovakashela eziningi imigoqo kanye zemicimbi yonkana Ireland lapho Irish brand inxusa Slane Whisky sika Will Lynch uyodala Masterclass ebonisa umlando kanye namagugu wenarha Slane Irish Whiskey. Uyokuyeka futhi lifundisa yokunambitha abafundi mayelana inqubo ekudalweni ehlukile lwenzeka ngesikhathi isimo art Slane Distillery.
Ukuqalisa i-ukuvakasha, Slane Whisky sabamba pop zikhethwa ngokukhethekile up umcimbi Irish Whiskey Museum ekhatsi Dublin ngesonto eledlule ukugubha umlando wenarha namagugu wenarha Slane futhi wabelane izivakashi inqubo ehlukile ekudalweni esetshenziswa ekukhiqizeni Slane Irish Whiskey.
Alex Conynham sibhekelela mcimbi Slane Whisky yokunambitha uhambo ngesikhathi Irish Whiskey Museum e Dublin. – Photo Credit: Sasko Lazarov / Photocall Ireland
Ngajabula lapho ngithola isimemo esehlakalweni lapho mina imtholile Slane Whisky Umnikazi Alex Conynham futhi Slane Whisky sika Irish Brand Ambassador Will Lynch.
Ukusebenzisa amanye imfundiso zasesiteji ezintsha kakhulu, Will Kwasithatha uhambo uchaze ukuthi Whisky Irish senziwa Slane kusukela wokuvuna Ibhali phezu Slane Castle bezindlu, ngokusebenzisa Malting, yokuphisa, Distilling, Ukukhula kanye Ukuhlanganisa.
Ingabe aqhubeka Slane Whisky zokuhlolwa Experience kanye nesigaba nogologo yokunambitha, ukubonakaliswa cocktail kanye deconstruction sephrofayela Slane nogologo ezehlukile ukunambitheka nokukhetha pairings ukudla.
Alex wanikeza imininingwane evulekile nethembekile amehlo mayelana nezinselelo ezikhona yokwakha entsha nogologo brand futhi distillery, ukwakha ngempumelelo kwezentengiselwano Slane Castle’ umlando njengoba Indawo Ikhonsathi ye-rock. Isenzo isihloko esikhulu sephephandaba i 1982, Ngonyaka Slane amakhonsathi yesibili kwakunguDodayi The Rolling Stones ayeyobuya ukudlala futhi emuva 2007.
A raconteur yemvelo, wakhe wabe izinkumbulo umndeni bekuhlela nokuhlela lezi rock amakhonsathi kwesikhathi bands efana Rolling Stones babe elithakazelisayo.
Abaningi kithi bacabanga ukuthi Slane 1982 Kungenzeka ukuthi i-Rolling Stones yokuvalelisa ekhonsathini. Ngo 1983, kudaleka ezikhulayo phakathi Jagger neRichards ivinjiwe babuka kwabo 5 iminyaka nge Jagger ngokugxila ezingasho kumaphrojekthi solo kuhlanganise yakhe 1995 Trans-Atlantic ukubhanqa noDavide Bowie-Live Aid. Ngo 1983 band ubedlala iminyaka engamashumi amabili futhi abaningi bacabanga ukuthi babeyizikhonzi indala kakhulu futhi ukhathele kakhulu ukugcina babuka.
Ngo ucezu Serendipity ezingase kuphela kwenzeke e-Ireland, ngobusuku emuva kwesehlakalo Slane zokuhlolwa ngesikhathi Irish Whiskey Museum, Ngineminyaka engu isivakashi ngesikhathi Rolling Stones Concert e Dublin ukubukela Mick Jagger(74), Keith Richards (74), uRonnie Woods (70) futhi Charlie Watts (76!) benza konke okusemandleni.
Njengoba ubona kusukela isiqophi ekhonsathini, ngemuva 56 neminyaka babuka, The Rolling Stones zikude esidlule. Just like Whisky ezinhle Irish, bamane uthole kangcono ngeminyaka!
Slane Whisky Isibuyekezo uStuart McNamara
Slane bathi Whisky yabo Irish kuyinto
“umoya abushelelezi uhlamvu zemvelo ngamanothi untamed oki kanye nesiqholo kusukela isignesha lenhlanganisela kathathu casked ka Irish Whiskeys”.
Thenga Slane Whisky at WhiskeySales.com
Bottled ngesikhathi 40% ABV, Slane Whisky is edalwe usebenzisa whiskeys Irish ethathwe trio emiphongolweni - intombi emiphongolweni ye-oki, emiphongolweni ayoliswe (elalikade equkethwe Tennessee likagologo Bourbon) futhi Oloroso Sherry emiphongolweni. Ngangibheke phambili avakashele le whiskey sokubuyekeza yesibili.
Ikhala enothando nemnene. I phuza lokuqala itjengisa eyinkimbinkimbi. Lawa manothi kokuqala kuthiwa ezinoshukela nokusikisela caramel, vanilla butterscotch. Kukhona sekugcineni ezicashile kodwa nakanjani okubabayo yonkana ithiphu phambi kodwa hhayi ulimi. Ngokuvamile Oloroso eseqedile nogologo uyobe nezithelo ezisawolintshi amathoni omisiwe. Kodwa lapha ubumnandi abaphila ngayo ihluke ngokuphelele. Isifaniso eliseduze ngingazi ukuthi ngizophendula ngithini wukuthi a ocebile ushokoledi truffle nge fondant orange. Rich, ubumnandi efudumele futhi mellow wezwakalisa ezisawolintshi.
Ngithole Slane nogologo ukuba bushelelezi kakhulu, ongenekayo futhi kulula ukuphuza nogologo ingajatshulelwa Lihle noma nge ice noma labathaki bamafutha. Iseluleko sami siwukuthi ukuphuza lihlale ekuqaleni ngaphambi kokwengeza amaconsi ambalwa noma splash elincane lamanzi ukuze ngempela ukhiphe futhi athuthukise efudumele caramel futhi butterscotch amathoni.
Slane Whisky kuyinto nogologo ekahle Irish i whiskey Wabasaqalayo ukuzama njengoba whiskey kuqala. Ngendlela Engavamile, it is ukufudumala ebusika sipped Lihle noma nge ukusaphazela yamanzi, kodwa kuqabula ehlobo nge ice noma cocktail.
A Kunconywa intengo nje € 33 lapha e-Ireland futhi kwenza kube nogologo ezingabizi kakhulu kwansuku ukusetshenziswa ngaphandle umcabango wesibili ne labathaki bamafutha noma cocktail njengoba nogologo party.
Ngemva kwethulwa Slane Whisky ngonyaka odlule, Mina ukhishwa ke ukukala ababili Pooka phezu Pooka Irish Whiskey Scale. Lokhu kwaba engakaze ibonwe Pooka isilinganiso se-level entry ezihlangene nogologo kwansuku. Nakhu Ngaloba kokuqala yami Slane Whisky ukubuyekeza.
“Ngiyaqiniseka ngempela ukuthi leli nogologo ezibonakala entry level Irish ezihlangene liqonde okwesikhathi ocacile 2 Pooka umklomelo nge 3 Pooka umklomelo kakhulu ekubeni aphume umbuzo. Lokho kwakuyoba wasibeka ngokuqinile Spot Yellow, Redbreast 15 futhi Abalobi Izinyembezi indawo. Ukuze uthole ezihlangene Malt Single - Single Grain Irish Whiskey ngesikhathi RRP nje € 33 ukufezekisa lokhu ezingeni Pooka isilinganiso kuyinto impumelelo Amazing ukukhishwa entsha nogologo brand lokuqala.”
Ngombono wami, Slane nogologo ingenye enemisebenzi kakhulu Whiskeys Irish emakethe namuhla. Ingenye nedlanzana “Swiss Army Knife” whiskey namazwi uvikelekile endaweni ehlala njalo ngo siqu nogologo siqu esigungwini njengendlela “whiskey bonke izikhathi”.
Ukusebenzisa umfanekiso imfashini, kunjani “Little Black Dress” noma Classic Blazer. Kuyinto iya kuphi, kunoma iyiphi indawo, yisiphi isikhathi nogologo ukuthi kungenziwa wakhonza ngokuzethemba; Lihle kubangani bakho aficionado noma nge labathaki bamafutha noma cocktail emcimbini indlu, ngaphandle kokuphula ebhange.
Uma ubhekene nesinqumo esitolo ukuthenga ibhodlela Jameson noma Slane ukusetshenziswa kwansuku zonke, I-euro ambalwa xaxa, Ngingathanda ukuthenga ibhodlela Slane njalo.
Thenga Slane Irish Whiskey at WhiskeySales.com
Slane Irish Whiskey itholakala e-Ireland iminyaka € 33 RRP (700ml) ngokusebenzisa O'Briens Valiwe Amalayisense noma Whisky Sales.com
Slane Whisky zokuhlolwa – Irish Tour Izinsuku
I Slane Whisky zokuhlolwa Experience bazovakashela zemicimbi lonke nezinsuku ezingaphezu amenyezelwa kulo lonke ihlobo. Umsunguli Alex Conyngham uzojoyina Will I-inombolo khetha imicimbi ngesikhathi uchungechunge tastings.
ULwesibili, May 29th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience ngesikhathi 1520 Ibha, Galway
ULwesithathu, Juni 6th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at Thomas Connolly, Sligo
ULwesine, Juni 7th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at Smyths, Ranelagh, Dublin
UMsombuluko, Juni 11th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at nanjengendluzele sika Head, Dublin
ULwesine, Juni 14th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at Kazbar, Waterford
ULwesihlanu, Juni 18th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience ngesikhathi eside Hall, Dublin
ULwesine, Juni 21st - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at Bar 101, Limerick
ULwesine, Juni 28th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at The Ritz, Tramore
ULwesine, Julayi 18th - Slane Whisky zokuhlolwa Experience at The Black Umnyango
Amathikithi amahhala kodwa kungagcini emhlabeni 30 izindawo umcimbi ngamunye, ngakho bhalisa ekuseni ukuze agweme ekudumazekeni. Hlola Eventbrite.ie ukuze ubone uhlu olugcwele zamasundu namakhiwane zemicimbi futhi uzibekele indawo yakho.
Slane Irish Whiskey Distillery futhi isivakashi isipiliyoni isikhungo, esisogwini emagcekeni edume Slane Castle, manje ovulekile futhi umema umphakathi ukuze ufunde kabanzi mayelana izindaba ngemuva likagologo senqubo yokudalwa esiyingqayizivele.
izinsuku Okuningi amenyezelwa. Hlola Eventbrite ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Thenga Slane Whisky Amazon UK
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana Slane Irish Whiskey, ukuvakasha:
Ukuze ufunde kabanzi ngomlando Slane Castle futhi Distillery, ukuvakasha:
Stuart McNamara kuyinto International uphehle(e)y Umbhali kanye Ukuvakasha Ukudla Blogger.
Stuart kuyinto Umhleli-in-Chief of Irish Whiskey.Com , le Irish Whiskey Inqola , WhiskeyWriter.com HaigWhisky.com futhi WhiskeySales.com. E-Ireland lwakubo, Stuart unguMahluleli ku Irish Quality Ukudla Imiklomelo. Landela uStuart iPersonal Tweets mayelana Whisky Irish, Irish Ukudla Izikhangibavakashi @IrelandandIrish futhi mayelana International Whisky ngokuvamile nganoma @Whiskey_Writer.